ब’ढाउनुस् यसरी इ’म्युन् पावर अनी बच्नुस् को’रोना बाट ! शेयर गर्नुहोस्। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
ब’ढाउनुस् यसरी इ’म्युन् पावर अनी बच्नुस् को’रोना बाट ! शेयर गर्नुहोस्।
“Corona को कारणले Animal Protein शरिर मा कमि भएमा हामी Malnutrition को स’मस्यामा फस्ने र अन्य रोगको जोखीमा पर्ने सम्भावना”
Corona को नेपालमा सं’क्रमण होस या नहोस केहि समय पछि Malnutrition को कारणले कुनैपनि साधारण Bacteria होस वा Virus ले हामीलाई आ’क्रमण गर्न सक्छ।
एक Microbiology र Immunology को प्राध्यापक को हैसियतले म सर्वसाधारण, वुद्दीजिवी‌, चिकित्सक र जानकार मित्रहरुमा यो science मा आधारित धा’रणा राख्दै छु।
Corona वाट बचाउने र वच्ने ठुलो उपाय भनेको हाम्रो प्रतिरोधात्मक शक्ति वढाउनु हो जुन हामी हरेक समाचार मार्फत सुन्दै आएका पनि छौ र शंसार भरका Doctor हरुले पनि वताउदै आउनु भएको छ। तर अझसम्म आएका messages मा प्रतिरोधात्मक शक्ति (immunity power) कसरी वढाउने वा वढछ भन्ने उल्लेख भएको पाईएन। Corona virus कसरी सर्छ र यस्लाई सर्न नदिन के के गर्ने भन्ने या Corona Virus कसरि मर्छ भन्ने कुराको जानकारी भने हरेक प्रकारका मिडियामा पनि आईसकेको छ।
यहाँसम्मकी WHO को सुझावमा पनि Corona virus सर्न वाट कसरी वच्ने भन्ने कुरामा आधारित छ। तर हाम्रो Immune System कसरि दरिलो पार्ने भन्ने तर्फ त्यति ध्यान गएको पाईदैन। त्यसैले Science मा आधारित रहेर शरिर मा प्र’तिरोधात्मक शक्ति (immunity power) कसरि बढाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु।
शरिरमा प्रतिरोधात्मक कार्य गर्ने वा immunity को कुरा गर्दा वा रोग संग लडन सक्ने immune power वढाउन हाम्रो खानामा प्रोटिन को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। Protein ले नै हाम्रो शरिरको हरेक immune cells or immunoglobulins वा प्र’तिरोधात्मक शक्ति वनाउने कोषहरू बन्नको लागी चाहिने Amino Acids (essential Amino Acids) प्रदान गर्दछ। यो protein हामी अण्डा, मासु, दुध, माछा र गेडागुडी वाट प्राप्त गर्ने गर्छौ।
हाम्रो शरिरको को लागी उपयुक्त आवस्यक Amino Acids वा Proteins मु’ख्यतया Animal sources वाट प्राप्त हुने उपयुक्त मानिन्छ जुन हामी मासु, अण।डा, दुध वा माछा वाट प्राप्त गरिन्छ। जुन विना हामी शरिरमा प्रतिरोधात्मक शक्ति वढाउन सक्दैनौ। तर गलत messages को प्रवाहले अधिकाम्स मानिसले Animal source protein याने कि मासु, अण्डा, माछा लगायत प’रिकार खान कम गरेको पाइएको छ। जस्ले गर्दा हाम्रो immunity power घटने गर्दछ।
जुन वेलामा आ’वस्यक छ त्यहिबेला झन हामी गलत प्रचार वाजीको पछिलागेका छौ। Corona virus मासु, अण्डा, माछा खाएर सर्छ भन्ने कुरै होईन। यस्को सेवन नगर्नाले शरिरको immunity level घट्ने कुरा पक्का हो।
हामीले चीन (China) लाई हेर्न सक्छौ। जव चीनमा पहिलो पल्ट Corona संक्रमण भयो, चीन लाइ sick country पनि भनियो तर अाज चीनले शं’सारलाई चकित पार्दै Corona virus वाट control प्राप्त गर्न सफल भएको छ किनकी उनिहरुले हरेक उपाय अपनाउनुको साथै व्यक्ति मा immunity power वढाउन भरमग्दुर प्रयास गरेका छन।
उनिहरुले खानामा protein को मात्रा लाई महत्व दिएका छन। त्यसैले अहिले चीनमा मासु र अण्डाको खपत अत्याधिक बढेको छ र चीनमा कुखुराको मासुको ख’पत चढेर भाउ ३ गुनाले वढेको छ भने भारतमा मासु संबन्धि नकारात्मक खवरले मासुको खपत घट्नुको साथै Corona संक्रमण बढन गएको छ।
हाल सम्म नेपालमा Corona virus संक्रमण का खवर त छैनन तर देस उच्च जोखिममा भने छ। कृपया रोकथामका उपायका साथ हाम्रो immunity power वढाउन अत्यन्त जरुरी छ।
त्यसैले control का उपाय अपनाउदै हाम्रो immune system बलियो बनाउन दैनिक Animal protein (मासु, दुध, अण्डा, माछा) खाने गरौ। Isolation वस्दै गर्दा दिनमा दुइ तिन पटक Animal Protein सुप पिउने गर्दा अवस्य हाम्रो immunity power वढने छ र Corona को जोखिम घट्ने छ।
✍️ Prof. Dr. Hom Bahadur Basnet
Previous यी हुन् को’रोनाबारे जान्नु नै पर्ने ८ कुराहरू! जा’नकारीको लागी शेयर गरौं।
Next भारतमा गुडिरहेको बसमा युवतीमाथि सामुहिक ब*लात्कार गर्ने चारजनालाई फाँ*सी दिइयो*